१७ औँ अनशन – Health Post Nepal
सत्याग्रहमै मर्न तयार छु, तर माग पूरा नभई डडेल्धुरा छोड्दिनँ : डा. केसी, स्थानीयले पठाउन नमानेपछि रित्तै फर्कियो सेनाको हेलिकोप्टर
८ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउन डडेल्धुरा पुगेको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर रित्तै काठमाडौं फर्किएको छ । अनशनको सातौँ दिन आइतबारसम्म डा. केसीको स्वास्थ्यबारे सामान्य सोधनीसमेत नगरेको सरकारले डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि सोमबार भने...
डा. केसीलाई काठमाडौं लाने सरकारी प्रयास, डडेल्धुरामा विरोध प्रदर्शन
डडेल्धुरामा १७औँ चरणको अनशनमा बसिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले जबरजस्ती काठमाडौं लाने प्रयास गरेको छ । डा. केसीलाई काठमाडौं लैजानका लागि हेलिकोप्टर डडेलधुरा पुगेको छ । तर डा. केसीले भने डडेल्धुरा छोड्न मानिरहेका छैनन् । उनले सरकारले आफ्नो माग...
डढेल्धुराको एक निजी घरमा पाँच दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि शुक्रबार साँझ अस्पतालमा सारिएको छ । परीक्षणका क्रममा रक्तचाप न्युन हुनुकासाथै छातिको अत्यधिक दुःखाई र मुटुको चालमा समेत गढबडी देखिएपछि उनलाई अस्पताल सारिएको हो...